Farmaajo iyo Mursal xaq ma’uleeyihiin in ay tastuurka dalka qaarne diidaan qaarne dhahaan waa tastuur ee hallagu dhaqmo | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Farmaajo iyo Mursal xaq ma’uleeyihiin in ay tastuurka dalka qaarne diidaan qaarne...
Farmaajo iyo Mursal xaq ma’uleeyihiin in ay tastuurka dalka qaarne diidaan qaarne dhahaan waa tastuur ee hallagu dhaqmo
Taariikhdu markeey aheeyd 15/08/2020 fadhigii Barlamanka Qaranka soomaaliyeed markii uu yimid Madaxweyne Farmaajo si uu khudbad ugu jeedo shirka Guddoomiye Mursal oo ku soo dhaweeyay ayaa yiri: Madaxweynaha waxaa xaq u siinayo qodobka 90aad ee tastuurka xarafka G in uu Madaxweynaha furo shirka Barlamanka, balse waxaa isweeydiin leh haddii ay Farmaajo iyo Mursal diideen qodobo tastuur ah ma’daliishan karaan qodobo kale oo tastuur ah? jawaabtu waxay si cad u noqoneeysaa ma’daliishan karaan qodob tastuur ah inteey horay u diideen qodobo tastuur ah maxaa yeelay suurto gal ma’aha tastuurka dalka qodobne waa diidayaa midne waa soo daliishanayaa.
Bal hoos ka fiiri qodobada tastuurka oo ay diideen Farmaajo iyo Mursal sidoo kale hoos ka fiiri qadobada ay dantooda ka dhax arkaan oo ay soo daliishadaan ama rabaan in lagu dhaqmo.
1) Qodobada tastuurka oo ay diideen Farmaajo iyo Mursal waa sidan:
A) Cutubka 2aad, madaxa 2aad ee tastuurka, qodobka 19aad farqada 1aad waxay leedahay: (qofne gurigiisa ama meeshii kale ee asaga gaar u ah lama baari karo lamana basaasi karo amar garsoore oo sababeeysan la’aantiis). Isla qodobka 19aad farqada 2aad waxay leedahay: (waxaa waajib ah in amarka garsooraha si toos ah loogu akhriyo daganaha hooyga, baarahane waxaa ka reeban ku xad gudubka sharciga).
Qodobkaan 19aad ee tastuurkii lagu heshiiyay Farmaajo waa diiday oo waakii guriga siyaasiga shakuur sharci darro iyo amar garsoore la’aantiis ku weeraray oo waliba muwaadiniin Soomaaliyeed ku xasuuqay si sharciga iyo tastuurka baal marsan dabcan Mursal asne qodobkaan waa la’diiday Farmaajo.
B) Isla cutubka 2aad, madaxa 2aad, qodobka 21aad ee xorriyadda isku socodka iyo Degitaanka farqadiisa 1aad waxay leedahay: (qof kasta oo si sharci ah ku degan dhulka Jamhuuridda soomaliya wuxuu xaq u leeyahay in uu si xor ah u dagi karo uguna dhax socon karo meel kasta oo dalka ka mid ah kana bixi karo).
Qodobkaan 21aad oo ah tastuurkii lagu heshiiyay waa diiday Farmaajo oo waakii u diiday in ay si xor ah dalkooda Hooyo ugu dhax safraan labadii Madaxweyne oo asaga ka horreeysay oo sida sharafta badan hoggaanka Qaranka ugu wareejisay ee Madaxweyne Sheekh Shariif iyo Madaxweyne Xasan Sheekh iyo waliba madaxdii la’socotay oo waakii Farmaajo ka hor istaagay ayakoo Beledweyne gargaar u waday, haddane waakii Farmaajo u diiday senator Fartaag iyo mudanihii kale ee Barlamanka oo la’socday in ay si xor ah ugu socdaalaan magaalada kismaanyo, Mursal asne waa la’diiday qodobkaan.
C) Isla cutubka 2aad, madaxa 2aad, qodobka 35aad farqada 5aad waxay leedahay: (qof kasta oo la’xiraa wuxuu xaq u leeyahay in 48saac gudahood lagu horgeeyo maxkamadda awoodda u leh).
Qodobkaan 35aad oo ka mid ah tastuurkii lagu heshiiyay Farmaajo waa diiday oo waa Kan siyaasiga Rooboow xabsi ku hayo muddo dheer oo ka badan 48saac asagoo aan hor keenin maxkamad, sidoo kale Farmaajo waakii muddo dheer oo ka badan 48saac xabsi ku hayay wasiirkii amniga ee Dowlad Goboleedka Jubaland mudane Abdirashiid Janan, waxaa kale oo uu diiday Farmaajo qodobo badan Mursal asne waa la’diiday.
2) Qodobada Farmaajo u daneeynayo oo uu rabo in loogu dhaqmo sidii ayaad qur’aan ah waa kuwan hoose.
A) Cutubka 4aad qodobka 89aad farqadiisa 5aad xarafka D wuxuu leeyahay (Musharraxiinta u tartameeyso Madaxweynaha Qaranka Soomaaliyeed midkii helo codadka ugu badan ee Barlamanka labadiisa Aqal ayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda noqonayo) qodobkaan 89aad farqadiisa 5aad xarafka D ayuu Farmaajo Madaxweyne ku yahay wuxuuna rabaa qodobkaan in si buuxda loogu Dhaqmo oo ay somali u aqoonsanaato in uu yahay Farmaajo Madaxweynaha sharciga ah ee Qaranka soomaaliyeed.
B) Isla Cutubka 4aad qodobka 90aad xarafka E Madaxweynaha wuxuu magacaabaa xilkane ka qaadaa taliye yaasha ciidamada heer Fedaraal kaddib markii uu soo jeedo Golaha Wasiirada qodobkaan ayuu Farmaajo ku magacaabay taliye yaal ciidan oo badan isla markaane kuwa kale xilalka uga qaaday asagoo Farmaajo rabo taliye yaasha ciidamada oo uu xilka u dhiibay iyo kuwa uu ka qaaday in ay amarkiisa raacaan ayakoo u hogaansamayo qodobkaan.
3) sida aan kor ku soo qeexay Farmaajo iyo Mursal waxay diideen qodobada tastuurkii lagu heshiiyay oo aan kor ku soo sheegay markaas Mursal iyo Farmaajo xaq ma’uleeyihiin sidii uu Mursal fadhigii Barlamanka u soo daliishaday qodobka 90aad xarafka D in ay tastuur soo daliishadaan oo shacabka Soomaaliyeed u sheegaan in tastuurka la’raaco? Jawaabtu waxay tahay maya shacabka Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay in uu yiraa: Farmaajo Madaxweyne ma’tihid maxaa yeelay mar haddii aad diidday qodobka 19aad, kan 21aad, Kan 35aad iyo qodobo kale annakane waa diidnay qodobka 89aad oo Madaxweyne ma’tihid sababtoo ah qodobada tastuurka in qaar la’diido Qaarne lagu dhaqmo meel ay tastuurka uga qoran tahay ma’leh.
4) Farmaajo fadhigii Golaha ee 15/08/2020 wuxuu si cad u sheegay in uusan ogolaan doonin wixii ka soo baxo shirka Dhuusamareeb 3 isla markaane uu ula soo noqon doono Barlamanka asagoo waliba yiri Barlamanka ayaa doorashada horay u ansixiyay taas oo ah qof iyo cod oo ay tahay ujeedka uu ka leeyahay Farmaajo in uu Guulwade yaasha cusub ee xooggagga wadaniyiinta lagu sheegay uu yiraa ayakaa codeeynayo halkaasne uu xorriyadda iyo masiirka umadda soomaaliyeed ku afduubo.
5) dowlad Goboleedyada iyo Dowladda Federaalka ah yaa xaq u leh in ay masiirka umadda Soomaaliyeed iyo doorashada jaan gooyaan? Waxaa xaq u leh Madaxda Dolwlad Goboleedyada, tusaale Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland ee Dani wuxuu mas’uul ka yahay oo uu nabadooda sugaa ugu yaraan 100 tuulo iyo magaalooyin waaweeyn sidaas darteed Dani ayaa uga xaq leh in uu doorashada maamulo oo uu Jaan gooyo Habka doorashada Farmaajo iyo Mursal oo aan hal Xaafad oo Magaalada ay dagan yihiin ee Xamar ku taal shacabka Soomaaliyeed oo ku nool baahiyadooda waxba ka qaban karin sida amnigooda iwm. Dani tusaale ayaan u soo qaatay ee Madaxweyne Qoor Qoor waakii boqollaal KM madaxdii shirkii Dhuusamareeb ka qeeyb gashay ku galbiyay si nabad ah, shacabka Soomaaliyeed oo dhulkaas joogane ay nabad ku raaxeeystaan, maamul Goboleeydyada kale mid walba dhowr Magaalo ugu yaraan ayuu shacabka ku nool nabadooda sugaa sidaas darteed Dowlad Goboleedyada ayaa xaq u leh jaangooynta doorashada iyo ka hadalka masiirka umadda soomaaliyeed.
Previous articleMadaxweyne Qoor Qoor oo lumiyey Kalsooni badan oo lagu qabay
Next articlePresident Qoor Qoor loses a lot of confidence in him
Somalia: Military Court Releases Detained Journalist Mahamed Abdiwahab Abuja
Ganacsatada Jaadka Kenya oo keenay Qorshe cusub ay jaadka kusoo galin...
Wararkii Caawa ee Tvga Dayniile